चिसो बाट पानी सिस्टम रक्षा गर्न कठोर हिउँदमा बस ताप केबल, भित्र वा बाहिर पाइप स्थापित छ जो प्रयोग, कठिन छैन। वा मरम्मत क्षतिग्रस्त वा बरफ परिवर्तन गर्न ट्यूब भङ्ग - ताप तत्व कुनै पनि मामला मा समाप्त गर्न आवश्यक हुनेछ अप्रिय परिणाम गर्न प्रमुख, बरफ र बरफ ridges को संग्रह रोक्छ।
को ताप केबल के हो?
को ताप केबल को आधारभूत सिद्धान्त - गर्मी मा विद्युत ऊर्जा रूपान्तरण हो। यी ताप प्रणाली को मुख्य विशेषता तिनीहरूले मात्र ऊर्जा स्वीकार र इन्धन वा oxidant प्रयोग बिना गर्मी यसलाई रूपान्तरण छ। ताप पाइप लागि प्रणाली तिनीहरूलाई मार्फत पारित बिजुली वर्तमान को जोखिम द्वारा गरम छन् र बाहिरी संचार को defrosting अनुमति छैन। त्यसैले, पानी खरीद लागि ताप केबल बस हिउँदमा सम्पूर्ण पानी आपूर्ति नेटवर्क को विफलता रोक्न आवश्यक छ। बाह्य पाइपिंग लागि ताप सिस्टम जो तापमान अचाक्ली सहनु गर्न सजिलो छ, तंग सहज, विभिन्न प्रभाव गर्न प्रतिरोधी खोल संग तार प्रयोग छ। भित्र बाहिरी तह एक ताप तत्व हो। को ताप केबल को तापमान lowering द्वारा mains जोडिएको छ। को ताप तत्व actuated र सम्पूर्ण ताप सिस्टम उत्पादन गरिएको छ। र परिवेश तापमान गर्दा केबल शक्ति बन्द गरिएको छ र नाली सामान्य अपरेसन छ।
किन यो एक केबल हीटर प्रयोग गर्न आवश्यक छ?
को ताप केबल केही प्रयोग सकारात्मक पक्षहरू, यहाँ मुख्य हुन्छन्:
बचत। को ताप केबल को जडान तपाईं बाह्य परिवेश तापमान आधारमा ताप शक्ति समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ। प्लस, नियमन आपूर्ति लागि आवश्यकता।
डिजाइन को बहुमुखी: हीटर केबल कुनै पनि नाली संग सुसज्जित गर्न सकिन्छ दुवै बाहिर र जमीन तल disposed।
सुरक्षा: इन्सुलेशन प्रणाली, कुनै दोष नभएको हो यो बाह्य, थर्मल यांत्रिक र रासायनिक प्रभाव देखि एक विश्वसनीय सुरक्षा रूपमा सेवा गर्दैछन्।
ताप केबल को प्रकार
केबल पाइप ताप सिस्टम को मुख्य तत्व जो दुई प्रजातिहरू मा आउछ एक ताप केबल, छ:
प्रतिरोधक - यो एक कम लागत र अक्सर लैस underfloor ताप प्रणाली र अप गर्न 40 मिमी को सानो व्यास पाइप लागि प्रयोग गरिन्छ जो घरपरिवारमा एक सरल ताप केबल को स्थापना संग प्रतिनिधित्व छ।
आत्म-विनियमन ताप तार ट्यांक र लागि प्रयोग गरिन्छ एक व्यास संग पाइप 40 मिमी को, र छत Gutters, switchboards र अरूलाई।
प्रतिरोधक ताप केबल
यो तत्व को सञ्चालनको सिद्धान्तलाई पाइपलाइन समर्पित केबल र सेन्सर मध्यम को परिवेश तापमान परिवर्तन प्रतिक्रिया कि साथ बिछाउने आधारित छ। तिनीहरूले समय समयमा जडान र एक निश्चित तापमान मा ताप सिस्टम जडान विच्छेद गर्नुहोस्।
समानान्तर (रिबन) र सर्पिल: को ताप केबल विभिन्न तरिकामा आफ्नो हातमा सम्भव छ राख्नु गर्न। केबल एल्यूमीनियम टेप संग पाइप संलग्न छ। एक ताप सिस्टम स्थापना गर्दा मुख्य कुरा हो - अत्यधिक तनाव ताप केबल बच्न। कहिलेकाहीं राम्रो सम्पर्क र पनि गर्मी वितरणको लागि यो एल्यूमीनियम पन्नी धेरै पत्रहरु मा पाइप र तार बेर्ने सिफारिस गरिएको छ। साथै, सिस्टम को एक अधिक कुशल सञ्चालन, एक विश्वसनीय थर्मल इन्सुलेशन संग सुसज्जित हुनुपर्छ किनभने आवश्यकता को मामला मा छ हात द्वारा ताप केबल को मरम्मत गर्न सुनिश्चित गर्न। को विसंवाहक बिजुली ऊर्जा लागत कम गर्न सक्छ र गर्मी हानि को दर कम गर्न। गर्मी इन्सुलेट सामाग्री पर्याप्त कम थर्मल चालकता गुणक छ जो खनिज ऊन, हुन सक्छ रूपमा।
आत्म-विनियमन ताप केबल
अब ताप सिस्टम को अन्य प्रकारको के छ विचार गर्नुहोस्। आत्म-विनियमन ताप केबल - कि अंतर तापमान को प्रभाव अन्तर्गत आफ्नो प्रतिरोध परिवर्तन कि बहुलक छन् दुई अछूता कंडक्टर। कुनै सेन्सर वा विद्युतीय तापमान नियन्त्रक आवश्यक छैन। कि परिवेश तापमान को बहुलक को प्रतिरोध कम छ lowering द्वारा, छ, र त्यहाँ उत्पादित गर्मी बढी निम्त्याउँछ जुन वर्तमान बलको वृद्धि छ। वृद्धि तापमान संग, प्रक्रिया उल्टाउन छ।
गर्मी को यो रकम वातावरण वा केही विशेष बिन्दु तार गर्न परिवेश तापमान परिवर्तन मा बहुलक को प्रतिक्रिया मा निर्भर गर्दछ, र यसैले यो फरक छ। यो सुविधा आत्म-विनियमन ताप केबल धन्यवाद विभिन्न ठाउँमा प्रयोग र एक एकदम लामो जीवन छ गर्न प्रभावकारी।
इन्सुलेशन को ताप केबल र यसको अर्थव्यवस्था को उच्च सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ। आवश्यक भएमा, यो यसको गुण असर गर्दैन चाहेको आकार, को टुक्रा मा कटौती गर्न सकिन्छ।
प्रतिरोधक गर्न आत्म-विनियमन केबल को लाभ
प्रतिरोधक केबल लागि यो मध्यम यसको सम्पूर्ण लम्बाइ साथ समान छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ, यो अभ्यास मा गर्न धेरै गाह्रो छ। यो अक्सर केबल को तात्दै र ताप सिस्टम विफलता को निस्कनुहोस् जान्छ। स्थापना भएको ताप केबल को बाहिर गरिएको छ जहाँ, तापमान स्वतः क्षेत्रमा कम गर्मी अपव्यय संग, अन्य क्षेत्रमा यो अपरिवर्तित रहन्छ गर्दा कम छ।
आत्म-विनियमन केबल भोल्टेज र एक एकदम लामो समय आफ्नो वृद्धि को मामला मा खपत एक उच्च प्रतिरोध छ।
प्रतिरोध केबल एक स्थिर लम्बाइ, जो परिवर्तन गर्न सकिँदैन छ, र आत्म-विनियमन केबल चाहेको आकार को टुक्रा मा कटौती गर्न सकिन्छ।
आत्म-विनियमन ताप केबल स्थापना। भित्री workings
आत्म-विनियमन ताप सिस्टम दुई तरिकामा स्थापित गर्न सकिन्छ: आंतरिक र बाह्य। को ताप केबल को स्थापना मा गुणात्मक काम र चिल्लो विश्वसनीय सञ्चालन ट्याप गर्नुहोस्, ढल वा अन्य कुनै पनि प्रणाली प्रदान गर्दछ।
ट्यूब नै गर्न प्रत्यक्ष पहुँच को अभाव मा 50 मिमी - भित्री विधानसभा सानो व्यास को पाइप लागि प्रयोग गरिन्छ। पाइप सिस्टम जमीन अन्तर्गत हुँदा, आफ्नो हात संग ताप केबल ट्यूब मा धक्का। यसको लम्बाइ पाइपलाइन को लम्बाइ बराबर हुनुपर्छ। मूलतः यस्तो विधि नयाँ पाइप घुसाउन लागि प्रयोग गरिन्छ।
आफ्नै हातले ताप केबल आउटडोर स्थापना
जब ताप केबल को बाह्य व्यवस्था पाइप को सतह को लागि निश्चित छ। यसबाहेक, यसको लम्बाइ ट्यूब को लम्बाइ बराबर हुन सक्छ, र यो नाघ्यो। यो ताप केबल को विधि, उत्पादन गरिएको छ जो आफ्नै हात को स्थापना, पाइप संलग्न छ कसरी छ, कि थाकबनाउदै विधि, निर्भर:
Linear तरिका हो। केबल लम्बाइ पाइप को आकार बराबर। को ताप तत्व को फिलामेंट्स संख्या आवश्यक क्षमता आधारमा चयन गरिएको छ।
बक्र विधि। केबल लम्बाइ ट्यूब को लम्बाइ भन्दा बढी छ। आफ्नो च्यानल बक्र वरिपरि राखिएको छ। यो इन्सुलेशन उपकरणहरू संलग्न सबैभन्दा महंगा विधि हो।
ताप केबल बाह्य स्थापना ताप पाइप लागि resettlement सिस्टम गर्न सजिलो र तेज तरिका हो। कहिलेकाहीं यो बाह्य भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। बरफ धेरै बाहिर मा घाउ छ कि एक भन्दा छिटो defrost अक्सर ट्यूब केबल भित्र राखे। तर यसको कार्य कुनै पनि मामला मा कार्य गर्दछ।
को ताप केबल को जडान
पहिलो, तपाईं विद्युत आउटलेट देखि वा ताप केबल शक्ति लिनु आवश्यक छ। विद्युत प्यानल देखि पर्याप्त रिमोट एक स्थानमा ट्यूब assembling गरे गर्दा, प्रयोग गर्नु पर्छ टर्मिनल बक्स। आफ्नो हात संग ताप केबल को विद्युत जडान तस्वीर बनाउन। यो कि उत्पादन आएका निर्देशनहरू फाइदा लिन उचित छ। अनावश्यक जडान सरल टर्मिनल जडानहरू रूपमा डिजाइन गरिएको हुन सक्छ, र तयार बनाउने ताप केबल प्रयोग।
कसरी आफ्नो हातमा एक ताप केबल बनाउने?
ताप तत्व किन्न विशेष स्टोर वा निर्माण मा हुन सक्छ, तर लागत एकदम उच्च छ कि सजग हुनुपर्छ। केही सिप र केही प्राविधिक सीप संग, तपाईं हात द्वारा ताप केबल बनाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, उपयुक्त सामाग्री पर्याप्त छ प्रयोग गर्नुहोस्। कर्पोरेट शक्ति ताप प्रतिस्थापन एक टेलिफोन केबल हुन सक्छ। यो आकार र रूपको ताप मिल्दोजुल्दो छ। पातलो केबल यस्तो, बलियो र कठोर। यो एक विश्वसनीय इन्सुलेशन छ र एक भिजेको वातावरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसलाई टेलिफोन केबल ताप सिस्टम को उत्पादन धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरु deprived गरिने स्पष्ट छ। उदाहरणका लागि, यो आत्म-प्रक्रिया लागू गर्न असम्भव हुनेछ। साथै, सिस्टम कुनै विशेष खाद्य अलग्गै छ। तर, सबै माथि छैन त्यसैले तपाईं सुरक्षित एक घर ताप केबल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आवश्यक विशेष उपयोगी गुणहरू छ। आफ्नै हातले स्थापना गर्न गाह्रो छैन। पाइप बाहिर छ, - पहिलो, आफ्नो अस्तर को स्थान निर्धारण। धेरै कस तार को सतह संलग्न। घाउ छ, जो अधिक, सामान्यतया कस पन्नी र्याप केबल संग ट्यूब एल्यूमीनियम टेप, अर्थात् उहाँले सब्सट्रेट गर्न ताप तत्व प्रेस। यस्तो ताप पाइप प्रबन्ध गर्न सकिन्छ मात्र होइन पानी को लागि तर पनि मलजल लागि। यो चिस्यान तिनीहरूलाई रक्षा गर्न सबै ताप केबल अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। तपाईं गर्मी र waterproofing प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एक समय वा ताप केबल को आवधिक काम को लागि, शक्ति केबल बनेको हातमा देश वा मान्छे impermanent छ बाँच्न जहाँ एक ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
निश्कर्षमा हामी ताप प्रणाली ताप केबल छ जो पानी आपूर्ति, गर्मी गर्न भनेर भन्न सकिन्छ - यो वर्ष भर र विशेष गरी जाडो समयमा पूर्ण कार्यका लागि एक आवश्यक घटक छ।
एक सजावटी प्लास्टर कसरी लागू गर्ने? सजावटी प्लास्टर पर्खालहरु
आफ्नो हात संग गेराज गर्न अनुकूलता। भण्डारण साइटहरु
पुस्तक "इतिहास Narnia को" पत्रुस Pevensie को अक्षर। पत्रुस Pevensie गर्ने खेल्छ?
अमेरिकी अभिनेता - "ढुङ्गा Romancing"